Lixdii General ee Somalida Dhibaateeye xaggay kubdambeeyeen? – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Lixdii General ee Somalida Dhibaateeye xaggay kubdambeeyeen?
Allhadaaftimo May 15, 2020 May 15, 2020 Uncategorized
Ma aqaan qawlkaas ama (athar-kaasi) saxnimadiisa laakiin waxa jira kelmad laga soo dheegto Ibn Casaakir una meel-martay culimada oo la’ yidhaahdo hilibka culimadu waa sumaysan yahay: (لُحُوم الْعلمَاء مَسْمُومَة)
oo looga jeedo qofka dhiba culimada wuu ku sumoobaa oo kama faa’iido, ama si xun buu u dhintaa. Ilaahay baa og. Laakiin halkan waxan ugu soo qaatay tusaale. Lix Jeneral oo Ethiopian ah oo colaad ku dhex abuuray labada shacab ee Soomaalida iyo Ethiopian-ka, si khaas ah oo nacayb fog ku jirona u dhibay Soomaalida iyo halkii ay Jananadaasi ku dambeeyeen. Lixda General ee aan halkan kaga warami doono waxa ay kala yihiin:
Maqaal ay qortay jariiradda The Guardian ee ka soo baxda Ingiriiska 20kii May 1980kii waxay ku sheegtay dadka xoogga lagaga bara-bixiyey Bariga Ethiopia iyo Soomaali Galbeed ee uu bara bixiyey General Gebre-Kidan in ay ka badnaayeen malyuun iyo afar Boqol oo kun oo Qof oo leekaa tirada dadweynaha Eritrea ee xiligaas, maantana u dhigmi kara 5 Malyuun iyo 6 Malyuun iyo ka badan. Dadkaasina, inta u dhaxaysa Awdal, Hargeisa, Hiiraan illaa Jubbada Sare ee Gedo iyo xuduudda Bakool ayay qaxoonti ku ahaayeen muddo dheer. Dhiigga Soomaalidu ma raago’e halkee ku dambeeyey General Tesfaye Gabre-Kidan?
Mushkiladda Getachew kuma koobnayn kililka Soomaalida oo keli ah, ee shaqada ugu badan wuxu ka hayey Jamhuuriyadda dhexdeeda. Inkasta oo uu ahaa nin aad isu qariya, nin Dublamasi ah baa hore u sheegay oo yidhi: in aad aragto Meles Zenawi iyo in aad aragto Gen Getachew, kun jeer waxa fudud in aad aragto Raisal Wasaare Meles. Dublamasi kalena wuxu yidhi Raisal Wasaare Haile Mariam Desalegn waxa in badan ka awood badnaa General Getachew. Janaralku shaqada ugu badan ee uu ku mashquulsanaa waxay ahayd dagaal uu ku hayey Soomaalida, Oromada iyo Eriteriyanka. Xagga Soomaalida wuxu ka shaqeeyey fulinta laba qorshe oo uu lahaa Meles Zenawi oo uu ugu talo galay in aan Soomaali weligeed dowlad yeelan. Qorshaha koowaad wuxu ahaa (Balkanisation of Somali Republic) oo ah in Somalia loo qaybiyo state-yo yaryar oo kala madax-bannaan oo col ah), qorshahaas oo si fiican loo soo kariyey, isaguna uu si fiican u fuliyey. Qorshaha labaad na wuxu ahaa in hub fara badan la geliyo gudaha Soomaaliya.
Nacaybka Soomaalida ee Gen Getachew intaa kuma koobnayn. Kulan ay 9kii June 2009 wada qaateen Safirkii Maraykanka ee xiligaas iyo General Getachew oo ay baahisay Wikileaks wuxu kala hadlay sidii ururkii ONLF loogu dari lahaa liiska argagixisada dunida, madaxdiisana loo cirib-tiri lahaa sida kuwa Al Qaaciida. Arrintaas oo safiirka u cuntami weyday. Wuxu kaloo maalintaas kala hadlay Safiirka in la’ taageero jabhado iyo xoogag ka jira Soomaaliya oo aan sharci ahayn. Isku soo wada dar oo dhibtii uu General Getachew 20 kaas sanadood Soomaalida u geystay waa mid ay u dhutin doonto sanado badan oo dambe. Laakiin Dhiigga Soomaalidu ma raago, ee halkee ku dambeeyey General Getachew Assefa?
Ciidamadaas General Aman, inkasta oo Kornayl Salaad Gabayre iyo Kornayl Doonyaale oo ciidanka Soomaalida ee faranta jooga hoggaaminayey dagaal adag kula galeen Tog-Wajaale, Ina Guuxaa iyo Daba-Gorayaale, haddana ciidamadii duulaanka ahaa dhib badan bay u geysteen ciidanka Soomaalida oo xiligaas curdin ahaa. Dad badan oo Reer Somali Galbeed ahna way bara-kiciyeen. Dadkii uu Janaral Aman barakiciyey sanadahaas 1962-64kii waxa kamid ahaa Cabdiraxman Maadey oo ah Hoggaamiyaha xiligan ee ONLF iyo qoyskooda. Abwaan Sangubna markii uu dhibaatadaas xasuusinayey Xayle Selaase iyo madaxdii Afrika ee 1974kii Xamar ku shiraysay waa kii lahaa:
Gudoomiyaha Xisbiga HILOW
Previous Taliyaha qaybta Bolis Ka G Sanaag Ayaa Baaq Digniina U Diray Dad Waynaha Ka ganac Sada Jaadka
Next Robabki ka da,ay qaybo ka mid ah gobolka Sanaag ayaa saameeyay Beeralayda Deeganka Midigale